Nyocha banyere ngwaahịa Semalt na otu ha nwere ike isi lekọta gị na Top 10 nke ọchụchọ Google
Peeji mbụ nke google na-achịkwa okporo ụzọ 92%. Kedu ihe nke a pụtara maka azụmahịa gị? Ọ pụtara na SEO dị mkpa karịa mgbe ọ bụla.
Mgbe ị na-azụ ahịa, ịchọ ihe dịka njupụta isiokwu, azụ azụ, na ikike ọchụchọ nwere ike iwe nnukwu oge. Mgbe ị na-achọ ijiko nke a na igbo mkpa nke onye ahịa gị, ọ ga - abụ ihe na - agaghị ekwe omume. Ihe a mesiri ike bụ ihe mere ịchọrọ ọrụ raara onwe gị nye site na otu ndị ọkachamara na SEO.
Semalt bụ ụlọ ọrụ etinyela mkpa SEO dị na mbụ. Ha na - enyere ụlọ ọrụ na - enweghị ndị ọkachamara SEO ụlọ.
Ha na ndị ha na SEO na-emekọ ọrụ na-anwale nnwale n'efu maka ụbọchị ọrụ ha. Ha nwekwara ngwaahịa nke bụ maka ndị na-achọghị ịbanye na teknụzụ: AutoSEO.
Abtọlite Akụkọ Ha ccessga nke Ọma
Semalt bụ ụlọ ọrụ na-atụgharị onwe ya na ndekọ usoro egosipụtara. Ha nwere ọtụtụ ihe ịga nke ọma, ụfọdụ n'ime ha na-ahụ mmụba dị ukwuu. N'ihe banyere gerywa Ahụ TR, ha nyere aka na ịrị elu nke ugboro iri na anọ. You nwere ike ịhụ nkọwa nke okporo ụzọ ha n'okpuru.
AutoSEO tinyere ụlọ ọrụ ha na 100 kachasị maka mkpụrụokwu 179 maka ọnwa anọ. Ihe wetara ha n ’elu iri bụ ngwugwu FullSEO. Ihe ngwugwu a nyere ha ohere iku uzo 90% nke ndị mmadụ na-achọ ọrụ a. Anyị ga-atụle nyocha sara mbara nke usoro ndị a mgbe e mechara, mana okwu dị nfe bụ nke a: Semalt na-arụ ọrụ.
Semalt Bụ ụlọ ọrụ zuru oke na-arụ ọrụ na-ewere ndị ọrụ dị iche iche wuru maka ijikwa ụlọ ọrụ ọ bụla chọrọ ịnye ọkwa SEO. Ha bụ ọgbakọ zuru ụwa ọnụ, yabụ ikekwe ị na-asụ otu asụsụ.
Nwere ike ịgwa ha okwu na Skype, WhatsApp, telegram.me, email, ma ọ bụ ekwentị. Nwere ike ịhụ otu ha na ibe mkpara ha. I nwediri ike iwe obere oge iji nwee ekele maka nduru ha.
Ọ bụrụ na ị na-agụ nke a, o nwere ike ịbụ na ị nwere mmasị na SEO. May nwere ike ịbụ onye nweere onwe gị, obere onye ọchụnta ego, ma ọ bụ ụlọ ọrụ ịzụ ahịa ibe gị.
N'ọnọdụ ọ bụla, ị gaghị enweta tere aka na-enweghị ịghọta ụfọdụ ndị isi ụlọ ọrụ.
SEO, ma ọ bụ Nchọpụta Nchọpụta Nchọpụta, na-ewuli ebe nrụọrụ weebụ gị n'ụzọ ọ bụla na mgbe ndị mmadụ na-achọ oge akọwapụtara, ha ga-ahụ gị. Okwu ndị a, ma ọ bụ isi okwu, na-abawanye ụba nke okporo ụzọ gaa na ebe nrụọrụ weebụ gị. Ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịbụ dọkịta na - awa plastik mara maka rhinoplasty, isiokwu gị nwere ike ịgụnye "ịwa ahụ rhinoplasty" ma ọ bụ "rhinoplasty dị ọnụ ala."
Algorithm nke Google na-ewuli uzo ebe o jikọtara ndị mmadụ na weebụsaịtị dị mkpa, nwere ikike. Lee ihe atụ dị n'elu, nke na-eji okwu ahụ bụ "rhinoplasty." Ha nwekwara ikike n'ihi na ha sitere na isi mmalite ndị a pụrụ ịtụkwasị obi. Ọ na - eme nke a site na iziga ndị crawler, ma ọ bụ bots wuru iji nyochaa weebụsaịtị. Crawler na-ekpebi ogo dabere na ọtụtụ ihe dị iche iche.
Isi okwu dị mkpa bụ mkpụrụokwu ndị algorithm chere na ọ kachasị mma iji kọwaa ọdịnaya gị.
Ntugharị azụ azụ bụ ọnụ ọgụgụ njikọ nke ọdịnaya gị nke na-egosi na weebụsaịtị ndị ọzọ, karịchaa mgbe echere na ebe nrụọrụ weebụ ndị ahụ dị ka ikike.
Njikọ njikọ bụ usoro iji guzobe njikọ azụlinks.
Ọsọ nke weebụsaịtị
Sociallọ ọrụ mmekọrịta dịka mbak na ịhazigharị
Enwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-abanye na ihe SEO, anyị agaghị abanye na ha niile ebe a, mana ndị a ga-abụ ihe dị mkpa ka ị mata ịghọta ihe na-abanye na atụmatụ Semalt. Blọọgụ anyị nwere nduzi zuru oke na SEO ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịtụle isiokwu ahụ.
Otu Ngwaahịa Semalt siri bulie SEO gị
Ugbu a anyị nwere echiche ka mma banyere ihe anyị na-achọ, anyị nwere ike ịbanye na ngwaahịa Semalt na idoanya dị ukwuu. Anyị na-elekwasị anya na mpaghara achọtara n'okpuru taabụ ngwaahịa ha ka ihe wee bido. Ndị a gụnyere:
Webụsaịtị ahụ na-akọwapụta na AutoSEO bụ maka ndị chọrọ ịbawanye ntụgharị weebụsaịtị ha, mana na-enweghị itinye ego buru ibu. AutoSEO bụ ngwaahịa dị ala maka ndị chọrọ ịbanye na SEO. Ebe mmadụ 14,000 nọ n'ihe karịrị mba 192 so na nkwalite a, ọ nwetala ezigbo aha ewu ewu.
Nnukwu ihe mere eji ewu ewu a bụ ụbọchị 14,99 narị ikpe ha na-enye. Site na inweta AutoSEO, a na-ekenye onye ọkachamara na akaụntụ gị ka nyochaa saịtị gị. Ndi okacha mara SEO ga achoputa isi okwu eji ejikari n’ime oru gi, ma ndi puru iche inye gi ndi nleta na-acho izu.
Semalt na-enye akụkọ ogo site na usoro nyocha ha. Can nwere ike ịhụ etu ụlọ ọrụ gị si arụ ọrụ site na ile anya dashboard, nke bụ njirimara bụ isi mgbe ịbanye.
Mgbe nyocha nke Keywords dị na ụlọ ọrụ gị, ihe mgbaru ọsọ njedebe ga-abụ iji wulite njikọ nke weebụsaịtị gị iji hụ na ị nwere isi okwu.
Ha na-ejikwa njikọ arịlịka, nke ga-eme ka ndị ọrụ ruo n'otu ebe dị na peeji nke metụtara ha. AutoSEO na - ejikọ njikọta arịlịka ndị a na ndị na - abụghị arịlịka iji guzobe njikọ aha njirimara gị dị ka isi mmalite sitere na isiokwu ndị a.
Ricnye ọnụahịa na usoro a ga - adị iche n'etiti $ 99 kwa ọnwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ $ 900 kwa afọ. May nwere ike ịhọrọ ogologo oge mkpọsa gị ịbụ otu ọnwa, ọnwa atọ, ọnwa isii, ma ọ bụ otu afọ. Site na ntụnyere, ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ SEO ọzọ nwere ọnụahịa dị ala na $ 1000 maka mkpọsa ha. Ihe ngwugwu ha yikwara inwe obere nhọrọ.
FullSEO bụ ụdị AutoSEO dị elu. Ọdịiche kachasị dị iche n'etiti nke a na AutoSEO bụ na ị nwere onye njikwa Semalt ekenyela ikpe gị. Onye njikwa ahụ na-arụ ọrụ na ọkachamara SEO na mbido, wee zitere gị akụkọ mgbe niile banyere ọganihu nke mkpọsa gị.
FullSEO bu ukpuru ahia diri ahia ahia gi. ROI, ma ọ bụ ịlaghachi azụ na itinye ego, ka ọ bụrụ ihe dịka 700% dabere na ahụmịhe ndị ahịa gara aga. Kwa narị dọla 100 ọ bụla ị na-emefu maka nke a, ị ga-enweta 700 na azụ.
Iji maa atụ, ụlọ ọrụ na-azụmaahịa na Mexico nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ịrị elu 700% n'okporo ụzọ, na-eme ka ha jee na nke mbụ n'ọtụtụ isiokwu. Site na ịnọ na oghere kachasị maka isi okwu 724, ọ na-enye ha ohere iji aka iru ndị na-achọ ihe onwunwe na Mexico na ala karịa. Enweghị FullSEO, ha agaraghị ahụ ọkwa nke okporo ụzọ a.
Maka ezigbo ntụle nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-eme, anyị nwere ike lee WebFX. WebFX na-enye ọtụtụ njiri mara atụmatụ SEO na ngwaọrụ nyocha. Agbanyeghị, Semalt nwere ọtụtụ ọdịiche na nhọrọ ọnụahịa ha.
Maka obere azụmaahịa ndị nwere obere mmefu ego, nke a na-egosikarị ike. N'okpuru nhọrọ zuru ezu nke SESEO, Semalt nwere obi ụtọ inweta gị ọnụ ahịa ọnụahịa maka ngwugwu SEO mpaghara ha. Semalt na-achọ ka ejiri ego gị rụọ ọrụ. Nyocha ngwa ngwa nke weebụsaịtị ha gosipụtara ụgwọ opekata mpe kwa ọnwa $ 475 kwa ọnwa.
Could nwere ike ịnwale ọnwụnwa nke ụbọchị 14 na AutoSEO iji mee ka obi dị gị ụtọ na echiche nke a. Agbanyeghị, ịnwere ike iji weebụsaịtị ọzọ, ebe Semalt ga-agwa gị ihe ngwugwu ga-akacha mma maka saịtị ọ bụla. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ndị na-ere ahịa ndị ọzọ anaghị enye otu ụdị ngwaahịa nke Semalt nwere.
Gịnị bụ E-Commerce SEO?
Semalt na-enye ngwaahịa pụrụ iche maka ndị nwere E-Commerce, ma ọ bụ ụlọ ahịa n'ịntanetị, chọrọ. Ihe ngwugwu a dị ka ndị a kpọburu aha ma ọ bụ karịa nke ndọtị nke ngwaahịa AutoSEO na FullSEO.
Semalt lekwasịrị akara mkpụrụedemede dị ala dabere na ngwaahịa na akara ahụ. Igodo isi okwu ịchọrọ itinye, ma ọ bụ isiokwu ndị ha ga-atụ aro, na-elekwasị anya na ndị mmadụ na-achọ otu ngwaahịa.
Iji maa atụ, ọ bụrụ n’ịchọrọ iji otu okwu dị mkpa aha, “elekere nwoke dị ọnụ ala nke dị oke ọnụ,” ị ga - achọpụta na ndepụta ndị dị ugbu a gụnyere ndepụta post ma ọ bụ vidiyo.
Site na E-Azụmaahịa, ịnwere ike ịchọpụta elekere gị n'etiti ndepụta iri ma ọ bụ vidiyo ndị a kacha elu. Site na ụfọdụ ezigbo mkpụrụ okwu etinyebere nke ọma na ịkwalite SEO, ị ga-eweta azụmahịa gị n'otu ọkwa ikike maka isiokwu a.
Gịnị bụ nchịkọta?
Nchịkọta bụ okwu nke ọtụtụ ụlọ ọrụ ji. Google nwere ngwa ọrụ dum arụpụtara iji soro etu mgbasa ozi gị si akwụ ụgwọ na-eme aha Google Analytics. Ngwaahịa a bụ akụkụ nke AutoSEO na FullSEO, na dashboard na-abịa na ngwaahịa abụọ ahụ.
Nyocha nyocha nke Semalt na-enye ndị ahịa obi ike n'ụdị ebe enwere ike ịgụta ya ngwa ngwa. Ọ na-enyekwa Semalt isi iyi nke akaụntụ, na-enye gị ihe akaebe nke mkpọsa akwụ ụgwọ gị na-arụ ọrụ. N'okpuru bụ ụfọdụ stats maka ndị na-eji njikwa nyocha.
Nyocha miri emi na-enye gị ikike inyocha ndị na-asọmpi gị, ịchọpụta ahịa ọhụrụ, ma nata isiokwu ndị achọrọ iji tinye isi na ozi ahụ. Ọzọkwa, Semalt na-enye gị ohere soro ọnọdụ gị n'oge ọ bụla n'ụbọchị.
Gini bu SSL?
Mgbe ị hụrụ websaịtị na-aga site na HTTP gaa HTTPS, nke a bụ ọmụmaatụ nke akwụkwọ SSL eji. Omume nche a na - ezochi data gị nke mere na o na - eme ka o siere ndị ọchọ okwu nweta ike ịchọpụta ozi ha, dị ka data kaadị kredit.
O di nkpa ma oburu na webusaiti E-Commerce ma obu webusaiti nke na aru oru ndi n’echekwa ndi ahia. Ọzọkwa, ọ bụrụ Google kọwapụta saịtị gị dị ka ebe nchebe, ọ ga-enwe ohere ka mma iru ọkwa dị elu.
Nchikota otu Semalt nwere ike isi nyere gi aka inye aka n’ime Top 10
Site na ndekọ egwu achọrọ, narị ndị ahịa afọ ojuju, yana otu ndị ọkachamara dị iche iche, Semalt bụ ndị otu ọnụ ahịa dị oke ọnụ ahịa nke ndị mmadụ dị njikere isoro gị rụọ ọrụ iji hụ na ị nwere ike iru ihe mgbaru ọsọ gị.
Anyị ahụla ka AutoSEO, FullSEO, E-CommerceSEO, Nchịkwa, na SSL niile nwere uru ha na-anya n'iji okporo ụzọ gaa na ebe nrụọrụ weebụ gị. Site na ndi otu ndi okacha mara nke ha na ndi isi ha, ị gha achoputa isi okwu di nkpa, ya na azu azu ichoro iweta webusaiti gi n’elu Google.